ဘုန်းကျော်: ဦးမြင့်သိန်းကိစ္စကို ဒီလိုတွေးမိလို့ပါ
မြန်မာအချင်းချင်း ဒီမို / နအဖ တံဆိပ်တွေနဲ့ ရန်သူ မိတ်ဆွေ ခွဲခြားထားကတည်းက အခြေခံနိုင်ငံရေး အုတ်မြစ်ကိုက မှားနေပြီ။ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောကြားတဲ့တရားတွေဟာ စာအုပ်ထဲမှာမဟုတ်ပဲ လက်တွေ့ အတွေးအခေါ်တွေဆိုတာ မင်းတို့သိနေတာပဲ။ နအဖ ဗိုလ်ချုပ်တွေအပေါ် အမုန်းတွေကြီး … ဒေါသတွေကြီး . . အဲဒီတော့ မောဟတွေကလဲကြီးနေကြတယ်။ ဒီမိုတွေအားလုံးမှာ မောဟတွေဖုံးပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ပဲေ၀၀ါးနေပြီ။ ခေါင်းအေးအေးထားပြီး စဉ်းစားပါ. . ခင်ဗျားတို့တွေ ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ?။ နအဖတော်လှန်ရေးဟာ အသက်ငွေ့ွေ့လေးပဲ ကျန်တော့တယ်။ ဒီအတိုင်းဆက်သွားမှာလား.. လမ်းသစ်ကိုရှာမလား။ နအဖကို အမှောင်ထဲကနေ ဒေါသထွက်နေလို့ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မြန်စဉ်းစားကြပါ. . . ရွေးကောက်ပွဲက ဖင်ထဲဝင်တော့မယ်။
မြန်မာပြည်မှာမွေးတဲ့ . . .အညာသားစစ်စစ်ဖြစ်သည့်
ဒေါက်တာနိုင်အောင်ဆိုရင် သူ့သမီးအရွယ်လောက်ရှိတဲ့ အလိုမတူတဲ့ မိန်ကလေးတွေကိုပါ ကိုယ်ထိလက် ရောက်တဲ့အထိ လက်သရမ်းပါတယ်... လင်ရှိမယား တွေတောင် မချန်ဘူး...ကာယကံရှင်တွေကို ငဲ့ညာတဲ့အနေနဲ့ နာမည်တွေတော့ ထုတ်မပြောတော့ပါ ဘူး...အရင်မှားခဲ့တာတွေလည်း အခုထက်ထိတောင် နောင်တမရသေးဘူး...ပြောတော့ အတွင်းရေးမှူး ချုပ်တဲ့...တနေ့တချိန်ကျရင် အမှန်တရားအားလုံး ပေါ်လာမှာပါ...
မင်းတို့တွေ ကုလားအတွက် သိပ်ပြီးနာတတ်တယ် မဟုတ်လား? ကုလားစောက်ကျင့်ကို မသိပဲနာပေးနေကြတယ်။ သူတို့က ပြည်တွင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံနေပြီ။နအဖနဲ့ လက်တွဲပြီး မင်းတို့ကို နှိပ်ကွပ်တော့မှာကွ။ မွတ်ဆလင်ဝါဒတွက် ဆိုရင် အကုန်လုပ်မှာ.. သဘောပေါက်ထား။ မင်းတို့ကို ကုလားက နဖါးကြိုးထိုးပြီး လိုသလိုအသုံးချနေတာကို မရှက်သေးရင် ကုလားတွေအတွက် နာပေးကြဦး။ အောက်က ပေးထားတဲ့နေရာမှာ သွားဖတ်ကြည့်
ဒီစာကိုေ၇းထားတဲ့လူကိုက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနာကျည်းစရာ တခုခု၇ှိနေပုံပါ..ထားပါလေ..ဒါ့ထက်ပိုဆိုးတာက..ဒီပို့ကို ပြန်ပြီးတော့ ဂျီမေးမှာလင့်ပေးထားတဲ့လူတွေပဲ.... တော်တော်လေး၇ွံဖို့ကောင်းတယ်နော်..ကို့ယ်မျက်နှာကိုလည်း ပြန်ကြည့်စေချင်တယ်...နုတ်ခမ်းက အပဲ့တွေနဲ့...ဘယ်နေ၇ာမှာများကောင်းတဲ့နေ၇ာ၇ှိလည်း
လူများမကောင်းကြောင်းမပြောချင်ကျနဲံ..လက်တွေ့နော်...နုတ်ခမ်းကိုပြန်ကြည့်ကြည်..ပဲ့၇ုံတင်မဟုတ်ဘူး..၇ွဲ့ပါ၇ွဲ့လာမယ်။။ သတိထား...တချို့ကျတော့လည်း လူက ဂလန်ဂလား..ကြက်သရေ သစက်မှမရှိ..စက်ဘီးအစုတ်တစီးတောင်မ၀ယ်နိုင်ပဲနဲ့ သူများကို မနာလိုဖြစ်နေတယ်...သတိထားကျဟေ့..